Master suite 301 kumda wePonta Negra - I-Airbnb
Master suite 301 kumda wePonta Negra
Igumbi lakho lokulala e indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguAline
I-master suite esandula ukulungiswa, inika intuthuzelo epheleleyo kwiindwendwe, nekhitshi kunye nezixhobo zabasebenzisi. Ifakwe kwiflethi yeTerrazo ePonta Negra ejonge ulwandle, iimitha ezili-100 ukusuka ePonta Negra Beach, iApartment ebekwe kakuhle, kufutshane nemivalo, malunga neemitha ezingama-200 ukusuka kwiindawo zokutyela ezahlukeneyo, iimarike, ikhemesti, njl.
I-Apartment kwi-Flat Terrazo de Ponta Negra, esecaleni, kufuphi nemivalo, iivenkile, iimarike, iivenkile zeziyobisi, iinkonzo ngokubanzi (malunga neemitha ezingama-200). Indwendwe inokushiya imoto kwigaraji kwaye ihambe ngaselunxwemeni, ifumane zonke iinketho ezikhankanyiweyo.
4.42 out of 5 stars from 154 reviews
4.42 · Izimvo eziyi-154
Iibhari , iindawo zokutyela , iivenkile zeziyobisi , iimarike , iibhari ezinomculo ophilayo , iinightclub , iwaka kunye neenketho zeendwendwe ezinqwenela ukushiya imoto yazo ekhaya kwaye ziphume ngeenyawo. Ifumaneka entliziyweni yePonta Negra, ungayenza yonke ngaphandle kokukhathazeka malunga nantoni na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Natal